10 ဥရောပရှိသင်၏ကလေးများနှင့်အတူသွားရန်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပရှိသင်၏ကလေးများနှင့်အတူသွားရန်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 27/11/2020)
ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားလာ ဥရောပကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်တယ်. ဒါကြောင့်, ကလေးတွေပျော်မွေ့မည့်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်, တစ် ဦး မှတစ် ဦး အလည်အပတ်ကဲ့သို့ 10 ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ. ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံအချို့သည်ဥရောပ၌ဖြစ်သည်. ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ ဥရောပမှာ, အစိမ်းရောင်သန့်ရှင်းရာဌာနရှိပါတယ်, ပြီးနောက် 10 ဥရောပရှိကလေးများနှင့်အတူသွားရန်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များ.
1. ဗီယင်နာရှိ Schonbrunn တိရစ္ဆာန်ရုံ
Schonbrunn ဗီယင်နာရှိတိရစ္ဆာန်ရုံ, အိမ်ပြန်လည်းဖြစ်သည် 500 တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်, မှစ. 1752. ဥပမာအားဖြင့်, ဥရောပရှိရှေးအကျဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံသည်အာဖရိကဆင်နှင့်pရာမပန်ဒါတို့၏အိမ်ဖြစ်သည်. အဆိုပါ 42 resကဗီယင်နာတိရစ္ဆာန်ရုံသည်နန်းတော်အတွင်း၌တည်ရှိပြီးကလေးများနှင့်မိဘများအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုများရှိသည်.
ဥပမာ, တိရစ္ဆာန်ရုံရှိမိုးသစ်တောအိမ်သည်မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်တကယ့်မိုးသစ်တော၏အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပြုလုပ်ထားသောပုံတူဖြစ်သည်. အာရှတိုက်ကသေးငယ်တဲ့ otters တွေနဲ့ vampire ဏန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သင်လှည့်ပတ်နေစဉ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံအိမ်, ကျားနှင့် cheetahs, koala အိမ်နှင့်သင့်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတိရစ္ဆာန်များ၏နေအိမ်များစွာသည်သင့်ကိုစောင့်နေသည်.
ဗီယင်နာရှိ Schonbrunn တိရစ္ဆာန်ရုံသို့ဝင်ခွင့်ဗီယင်နာနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်. U4 Hietzing မြေအောက်ရထားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်.
2. 10 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ: Innsbruck ရှိ Alpine တိရစ္ဆာန်ရုံ
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပါတယ် Tyrol သြစတြီးယား၌တည်၏, Innsbruck ရှိ Alpine တိရစ္ဆာန်ရုံသည်၎င်းထက် ပို၍ တည်ရှိသည် 150 တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်. သင်ဤအံ့သြဖွယ်တိရစ္ဆာန်ရုံကိုသြစတြီးယားတောင်တန်းများရှိ Nordkette တောင်တန်း၏အောက်ခြေတွင်တွေ့လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်, မင်းကအဲလ်ပ်တောင်ကိုမိသားစုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, Alpenzoo Innsbruck အတွက်အချိန်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
မင်းရဲ့ကလေးတွေဟာအညိုရောင်ဝက်ဝံတွေအရမ်းအံ့သြသွားမှာပါ, Lynx, ရွှေလင်းတ, အိုး, နှင့်မီး salamander. ဤရွေ့ကားသင် Alpine တိရစ္ဆာန်ရုံ၌မြင်ရပါလိမ့်မယ်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အနည်းငယ်ဖြစ်ကြသည်. သင့်ရဲ့ကလေးတွေတိရစ္ဆာန်များပါလိမ့်မည်နေစဉ်, သင့်ကိုခေါ်သွားကြလိမ့်မည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များ.
သင်ဤအံ့သြဖွယ်တိရစ္ဆာန်ရုံသို့ရနိုင်သည် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်, မှ မြို့လယ်ခေါင်. ထို့အပွငျ, အမျိုးမျိုးသောဘတ်ဂျက် - ဖော်ရွေတိရစ္ဆာန်ရုံ pass options များရှိပါသည်, ဒါကြောင့်မင်းအရာအားလုံးကိုတွေ့နိုင်တယ်.
3. Czech Republic တွင်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ: ပရာ့ဂ်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်
ပရာ့ဂ်သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောတံတားများကြောင့်ကျော်ကြားသည်, ရှုခင်းများ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်ပါတီများ. သို့သျောလညျး, ပရာ့ဂ်တိရစ္ဆာန်ရုံအကြောင်းလူအများမသိပါ, ထိုသို့င်ကလေးတွေနှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံအကြားဂုဏ်အသရေတစ်နေရာပါပဲ.
.5 ၅ စတုရန်းကီလိုမီတာသည်ပရာ့ဂ်တိရစ္ဆာန်ရုံအားဥရောပရှိအကြီးမားဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်, ထက်ပိုအိုးအိမ် 4000 တိရိစ္ဆာန်များ. ထို့ကြောင့်, နှုတ်ဆက်ဖို့တဲနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအများကြီးရှိပါတယ်, ဥပမာ, အာရှဆင်, Bikira, ဖော်ရွေ Gorilla, များစွာသောပိုပြီးထူးခြားတဲ့နှင့်လှပသောတိရိစ္ဆာန်များ.
4. 10 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ: ဘာလင်သတ္တဗေဒဥယျာဉ်
ဂျာမနီရှိသက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောတိရစ္ဆာန်ရုံသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်အချို့၏အိမ်ဖြစ်သည်. ချီလီ flamingo နှင့် African Penguin များသည်ဘာလင်တိရစ္ဆာန်ရုံသို့သင်အလည်အပတ်ခရီး၌သင်တွေ့ရမည့်အထူးနေထိုင်သူများထဲမှအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။. ရှားရှားပါးပါးနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ဘာလင်ကိုဥရောပရှိသင်၏ကလေးများနှင့်အတူလည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဘာလင်သတ္တဗေဒဥယျာဉ်သည်တစ်ခု၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည် ဥရောပရှိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးမြို့များ, နှင့်တိရစ္ဆာန်ရုံမျှခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး. သငျသညျရှည်လျားသောတနင်္ဂနွေအဘို့အမြို့၌ရှိလျှင်, ထို့နောက်သင်တိရိစ္ဆာန်ရုံ၌တစ်ရက်အတွက်အချိန်ဖြုန်းသင့်သည်, တဲ, နှင့်ငါးမွေးကန်.
ဤတိရစ္ဆာန်ရုံနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာရှိနေသည် အထူးလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ သေးငယ်တဲ့သို့မဟုတ်ကြီးမားသောမိသားစုများအတွက်, တိရစ္ဆာန်ရုံသို့တစ်ခုတည်း entry ကို, သို့မဟုတ်ငါးပြတိုက်ဝင်ပေါက်နှင့်အတူ combo.
5. ဟမ်းဘတ်တွင်အအေးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ: Hagenbeck တိရစ္ဆာန်ရုံ
ဟမ်းဘတ်သည်ကြီးလှ၏ မြို့ - ခရီး ဦး တည်ရာ, နှင့်ကလေးများနှင့်အတူသွားရောက်ရန်ပျော်စရာမြို့. Hamburg ရှိ Hagenbeck Tierpark သည်ကလေးများနှင့်အတူဟမ်းဘတ်တွင်ပျော်စရာကောင်းသောအရာဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ဥရောပနှင့်ဂျာမနီရှိအအေးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်. ထက်ပိုမိုဖို့ပွင့်လင်း - လေအိမ်က 1,800 တိရိစ္ဆာန်များ, ဒီအံ့သြဖွယ်တိရစ္ဆာန်ရုံမှာအာတိတ်သမုဒ္ဒရာရှိတယ်. အာတိတ်သမုဒ္ဒရာသည်သင်မိသားစုစွန့်စားမှုတစ်ခုကိုစတင်သည်, နှင့်ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံသွားရောက်ကြည့်ရှု, ပင်ဂွင်း, နှင့်ပင်လယ်ဝက်ဝံ.
သင် Hamburg တွင်ရက်အနည်းငယ်ရောက်နေလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်ဟမ်းဘတ်ကဒ်ကိုရသင့်သည်. ဤနည်းဖြင့်သင်သည်အထူးလျှော့စျေးများကိုခံစားနိုင်သည် ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု, နှင့်တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်တိရိစ္ဆာန်ရုံရှိအပူပိုင်းငါးပြတိုက်အပေါ်အထူးလျှော့စျေး.
Bremen မှ Hamburg ရထားစျေးနှုန်းများ
Cologne မှ Hamburg မီးရထားစျေးနှုန်းများ
6. ဘယ်လ်ဂျီယံမှာရှိတဲ့ Antwerp တိရစ္ဆာန်ရုံ
ထိပ်တစ်ခု 10 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံများသည် Antwerp တိရစ္ဆာန်ရုံဖြစ်သည်. ငါတို့စာရင်းထဲရှိအံ့သြဖွယ်တိရစ္ဆာန်ရုံများကဲ့သို့ပင်, Antwerp တိရစ္ဆာန်ရုံတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးတိရစ္ဆာန်များကိုသင်အထင်ကြီးလေးစားမိနိုင်သည်. သို့သျောလညျး, Antwerp တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်ရုံတို့နှင့်ခွဲခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်, အန္တရာယ်ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အထူးအစီအစဉ်သည်, အဆိုပါ bonobos နှင့် okapi လိုပဲ.
လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းဘယ်လ်ဂျီယံရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံကြီးထွားလာခဲ့သည်. တိရစ္ဆာန်ရုံသည်ကြီးထွားလာသောကြောင့်မြို့၏အလယ်တွင်မရှိ, ဗဟိုဘူတာရုံနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်. ထို့အပြင်, တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့ Skywalk အများဆုံးထုတ်ဖေါ်ပါလိမ့်မယ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်း ဥယျာဉ်များနှင့်တ ဦး ၏ ဥရောပရှိ Off-the- ရိုက်နှက် - လမ်းကြောင်းကိုမြို့ကြီးများ.
7. Les Mathes ရှိ La Palmyre တိရစ္ဆာန်ရုံ, ပြင်သစ်
La Palmyre ရှိလှပသော Les Mathes တိရစ္ဆာန်ရုံသည်အစိမ်းရောင်သစ်တောများနှင့်ခုံများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်. ဥရောပနှင့်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုတွင်သင်နှင့်ကလေးများကိုတိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာနှင့်သဘာဝ၏အံ့ဖွယ်ရာများလှည့်လည်ကြည့်ရှုသည့်လမ်းကြောင်းများရှိသည်။.
တောရိုင်းပင်လယ်ခြင်္သေ့နှင့်တောရိုင်းကြောင်, Carreabean flamingos, နှင့်turရာမလိပ်, သင်တွေ့လိမ့်မည်အထူးတိရိစ္ဆာန်များအနည်းငယ်ဖြစ်ကြသည်. ဤအံ့ဖွယ်တိရစ္ဆာန်ရုံသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Aquitaine ဒေသတွင်တည်ရှိသည်, အတ္တလန္တိတ်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်မှာ, ထံမှအလွန်ကြီးစွာသောစွန့်စားမှု ရထားနဲ့ပဲရစ်.
8. အမ်စတာဒမ်ရှိ Artis တိရစ္ဆာန်ရုံ
ရုံ 15 မြို့လယ်ကနေမိနစ်, သင်သည်အမ်စတာဒမ်တွင်ပထမဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်. Artis တော်ဝင်တိရစ္ဆာန်ရုံသည်အရုဏ် ဦး ၏အိမ်ဖြစ်သည်, လိပ်ပြာ, အပူပိုင်းဒေသငါး, နှင့်သင့်ကလေးများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည့်သေးငယ်သောသက်ရှိများ, တွင် ARTIS-Micropia.
တစ်ဦးက အမ်စတာဒမ်တိရစ္ဆာန်ရုံသို့အလည်အပတ်ခရီးသည်အမ်စတာဒမ်ရှိမိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. တဲအများအပြားနှင့်အတူ, ငါးပြတိုက်ရန်, နှင့်ပိတ်ပင်ဟောင်း, အမ်စတာဒမ်ရှိ Artis တိရစ္ဆာန်ရုံသည်သာယာလှပပြီးတစ်ခုဖြစ်သည် ဘယ်အချိန်မှာနယ်သာလန်အတွက်သွားရောက်ရန်အထူးနေရာများ.
အမ်စတာဒမ်တော်ဝင်တိရစ္ဆာန်ရုံမှကမ်းလှမ်းထားသည့်အရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့ရန် Artis တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့် Micropia လက်မှတ်ကိုသင်ဝယ်ယူသင့်သည်.
9. အင်္ဂလန်တွင်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ: Chester တိရစ္ဆာန်ရုံ
အင်္ဂလန်တွင်အကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံတည်ရှိသည် Cheshire နှင့်ထက်ပိုမိုနေအိမ်ဖြစ်ပါတယ် 35,000 တိရိစ္ဆာန်များ. Chester တိရစ္ဆာန်ရုံသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဥယျာဉ်များစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သောကြောင့်သင့်ကလေးများနှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။. ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိတိရစ္ဆာန်များရှိသည်, lemurs လိုပဲ, ကြီးစွာသော hornbill, ကဗျာ, နှင့်များစွာသောပိုပြီးထူးခြားတဲ့တိရိစ္ဆာန်များ.
လည်း, သင်သည်သင်၏မိသားစု outing တိုးချဲ့ဖို့အချိန်ရှိပါက, တိရစ္ဆာန်ရုံရှိလှပသောဥယျာဉ်များသို့သွားရန်သေချာစေပါ. Chester တိရစ္ဆာန်ရုံရှိပန်းချီကားများသည်ကမ္ဘာကျော်နာမည်ရှိသည်, နှင့်သစ်ခွများလုံးဝခြွင်းချက်ရှိပါတယ်. Chester တိရစ္ဆာန်ရုံသို့အလည်အပတ်ခရီးသည်စုံလင်သောမိသားစုပြင်ပလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်.
10. ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဘေဆယ်တိရစ္ဆာန်ရုံ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံသည်ဘေဆယ်လ်၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်. ဘေဆယ်တိရစ္ဆာန်ရုံသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိတိရစ္ဆာန်များနေထိုင်သည်, သငျသညျအမျိုးမျိုးသောပူးတွဲအတွက်၎င်း၏သဘာဝနေထိုင်သူ၌ရှိသမျှသောတစ်ခုတည်းသောတိရစ္ဆာန်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်.
ငါတို့အပေါ် Basel တိရစ္ဆာန်ရုံထည့်သောနောက်ထပ်အံ့သြဖွယ်အရာ 10 ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ, သားသမီးရဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံဖြစ်ပါတယ်. ဤတွင်သင်၏ကလေးများသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရလိမ့်မည်, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်, ပြီးတော့သူတို့ကိုကျွေးမွေးပါ.
တိရစ္ဆာန်ရုံသို့လည်ပတ်ခြင်းသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်. အစိမ်းရောင်ဥယျာဉ်များနှင့်သစ်တောများ, ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အပင်များ, ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ဖျော်ဖြေပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ 10 သင့်ကလေးများနှင့်အတူသွားရောက်လည်ပတ်ရန်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံ, ဥရောပရဲ့ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ဖြစ်ကြသည်, အနည်းဆုံးတစ်နေကုန်ခရီးသွားရကျိုးနပ်ပါသည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်သည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံသို့ရထားဖြင့်အံ့အားသင့်ဖွယ်ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ သင်၏ကလေးများနှင့်အတူဥရောပသို့အလည်အပတ်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးတိရစ္ဆာန် ၁၀ ကောင်” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်သင်တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-zoos-visit-kids-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
စွန့်စားခန်း အကောင်းဆုံး ဥရောပခရီးသွား Europewithkids familyholiday ကလေးတွေ ရထားခရီးသွား Travelingwithkids တိရစ္ဆာန်ရုံ